KAOMININA 32 TSY MANANA BEN’NY TANANA : “Tsy misy ny fanendrena PDS”
Tsy misy velively ny fanendrena filohan’ny delegasiona manokana na PDS amin’ireo Kaominina mbola tsy manana ben’ny tanàna. 21 janvier 2020
Notsindrian’ny Minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Tianarivelo Razafimahefa io manoloana ny ahiahian’ireo Kaominina sasany mbola tsy nahazo ben’ny tanàna. Voalazan’ny lalàna mikasika ny fitantanana ny Kaominina fa ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna am-perinasa no misolo toerana vonjimaika azy raha toa ka milatsa-kofidiana ben’ny tanàna ny tenany. Nambaran’ny Minisitra fa mbola manan-kery io lalàna io amin’ireo Kaominina voakasika mandra-pahatongan’izay ben’ny tanàna voafidim-bahoaka.
Fantatra fa Kaominina miisa 24 no namoahan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana didy fa hamerenana fifidianana. Antony noho ny fisian’ny disadisa nandritra ny fifidianana izay notanterahina ny 27 novambra lasa teo. Kaominina miisa valo kosa no tsy nanana kandida ben’ny tanàna mihitsy. Izany hoe misy 32 ireo Kaominina mbola tsy manana ben’ny tanàna hatramin’izao. Nanamafy ny Minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana fa tsy misy ny fanendrena filohan’ny delegasionina manokana amin’ireo Kaominina ireo fa andrasana izay hahavitan’ny fifidianana amin’ny ampahany. Noho izany dia manohy ny asany hatrany ireo ben’ny tanàna mpisolo toerana mandra-pahavitan’io fifidianana io. “Tsy misy Pds izany. Ny voalazan’ny didim-panjakana dia mandra-pahatongan’ireo tompon’andraikitra vaovao voafidy, izany hoe izay voafidy amin’ilay fifidianana amin’ny ampahany dia mbola mitohy aloha ny asan’ireo izay eo amin’ny toerana amin’izao fotoana izao. Izany hoe, raha misy ireo ben’ny tanàna nametraka mpisolo toerana vonjimaika dia iny ihany aloha no mitohy manao ny asa mandra-pisian’ny ben’ny tanàna izay voafidy vaovao”, hoy ny Minisitry ny atitany.
Tompon’antoka tamin’izay tsy fietezana tany aloha ireo ben’ny tanàna niala
Nambarany fa azo irosoana avy hatrany ihany koa ny fifamindram-pahefana ary afaka mandray ny asany avy hatrany izay ben’ny tanàna vaovao. Anjaran’ity farany no mametraka ny fandaminan’asany eo anivon’ilay Kaominina. Nilaza kosa ny Minisitra manoloana ny fikasan’ireo ben’ny tanàna sasany hanao fitsirihana eo anivon’ny Kaominina fa tompon’andraikitra tsy afa-miala ilay ben’ny tanàna teo aloha raha toa ka hita fa misy ny tsy fietezana aorian’ilay fitsirihana.
“Mahazo manao fifamindram-pahefana. Aorian’izay, azo atao foana ny fitsirihana na “audit” ary ny tompon’andraikitra teo aloha izay nanao ny tsy nety no tompon’antoka tamin’izay zavatra tsy nety fa ny an’ilay ben’ny tanàna vaovao dia manomboka eo amin’ny fandraisany fahefana voalohany”, hoy hatrany izy. Marihina fa folo andro ao aorian’ny namoahan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ny didy mikasika ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina no hananan’ireo izay tsy afa-po ka hahafahany hametraka fitoriana eny amin’ny filan-kevi-panjakana.